Asa - Delta Engineering Belzika
Delta Engineering dia orinasa mitombo ary lasa iray amin'ireo mpamatsy fiovana vahaolana automatique ho an'ny indostrian'ny fipoahana.
Izahay dia orinasa manavao izay mamporisika ny mpiasa hivoitra amin'ny eritreritra boaty ivelany,…. Manentana ny mpiasa ny mpitarika anay hianatra sy hivoatra mandritra ny asany manontolo ao amin'ny Delta Engineering.
Amin'ny alàlan'ny kolontsaintsika, ny fiara sy ny fahaizan'ny mpiasa tsirairay, dia misy toerana tokana ahafahana mameno ny fangatahan'ny mpanjifantsika maneran-tany.
Ophasselt - Belzika
Mpivarotra - ROMANIA
Azafady mba jerena eto ambany ny lisitry ny fialanay tena niavaka.
Programmer / mpandraharaha cnc
Injeniera endrika elektrika
Injeniera amin'ny fanompoana
Ny varotra anatiny
Injenieran'ny automatisation IT
Injenieran'ny mpivarotra (miasa irery)
Sales Engine Engineer
Injeniera Chain Supply
Raha liana amin'ny asa rehetra voalaza etsy ambony ianao dia alefaso any amin'ny CV ny CV [email voaaro].
Raha liana amin'ny asa rehetra voalaza etsy ambony ianao dia alefaso any amin'ny CV ny CV [email voaaro]
Mpandrindra programmer CNC
Injeniera amin'ny endrika mekanika
Injeniera momba ny varotra
Injeniera fijerena fahitana
Delta Engineering Inc amin'izao fotoana izao tsy manana toerana banga miavaka.
Joba ref *
fiarahabana * Mr.Rtoa.
antony manosika *